ESI WEGHACHITE NDEKỌ WINDOWS 10, 8 NA WINDOWS 7 - ISIOKWU - 2019
12/29/2018 windo | mmemme
Ihe ndekọ Windows bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke sistemụ arụmọrụ, nke bụ nchekwa data nke usoro na usoro mmemme. Ọkwa OS, ntinye ngwanrọ, iji tweakers, "Cleaners" na ihe omume ndị ọzọ na-eduga ná mgbanwe na ndekọ ahụ, nke, mgbe ụfọdụ, nwere ike iduga na arụmọrụ usoro.
Akwụkwọ ntuziaka a na-akọwa ụzọ dịgasị iche iche iji mepụta ndabere nke Windows 10, 8.1 ma ọ bụ Windows 7 ndekọ na weghachite ndekọ ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ịmegharị ma ọ bụ arụ ọrụ.
Nchekwa akpaaka nke ndekọ
Dekọọ backups na weghachi ihe
Ntuziaka edozi nke faịlụ ndekọ Windows
Nwepu ndabere na nchekwa ndabere aha
Nchekwa akpaaka nke usoro ndekọ
Mgbe kọmputa na-abaghị uru, Windows na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ntanetị, usoro na-emepụta ndabere nke ndekọ (site na ndabara, otu ugboro n'ime ụbọchị 10 ọ bụla), nke ị nwere ike iji weghachite ma ọ bụ nanị detuo ya na drive dị iche.
Emere nkwado ndabere na mpaghara nchekwa C: Windows System32 config RegBack na iji weghachite ya zuru ezu iji detuo faịlụ site na nchekwa a na nchekwa. C: Windows System32 config, kachasị mma - na ebe mgbake. Na otu esi eme nke a, edere m nkọwa zuru ezu na ntuziaka Weghachite ndekọ Windows 10 (dabara maka nsụgharị nke usoro ahụ).
N'oge nkwado nchekwa ndabere, a na-eji ọrụ ọrụ RegIdleBack sitere na scheduler ọrụ (nke nwere ike ịmalite site na ịpị R + R ma banye taskschd.msc), nke dị na ngalaba "Task Scheduler Library" - "Microsoft" - "Windows" - "Registry". Ị nwere ike iji aka rụọ ọrụ a iji melite ndabere nke ndekọ ahụ.
Ihe dị mkpa: Malite na May 2018, na Windows 10 1803, nkwado ndabere nke ndekọ ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ (anaghị ede faịlụ ma ọ bụ nha ha dị 0 KB), nsogbu ahụ ka dị na December 2018 na mbipute 1809, gụnyere mgbe iji aka na-amalite ọrụ ahụ. A maghị ya ma ọ bụ ahụhụ, nke a ga-edozi, maọbụ ọrụ ahụ agaghị arụ ọrụ n'ọdịnihu.
Ndekọ backups dị ka akụkụ nke Windows mgbake ihe
Na Windows, enwere ọrụ iji mepụta ihe mgbake na-akpaghị aka, yana ike ịmepụta ha aka. Tinyere ihe ndị ọzọ, isi ihe mgbake nwere ndabere nke ndekọ ahụ, na mgbake dị ma na usoro usoro ma ọ bụrụ na os amaliteghị (iji mpaghara mgbake, gụnyere site na diski mgbake ma ọ bụ eriri USB / diski na diski os) .
Nkọwa maka okike na iji ihe mgbake na isiokwu dị iche - Windows 10 Ihe Ndoghachite (dị mkpa maka nsụgharị nke usoro).
Ntuziaka nkwado nke faịlụ ndekọ
Ịnwere ike iji aka gị detuo faịlụ Windows 10, 8 ma ọ bụ Windows 7 ugbu a ma jiri ha dị ka ndabere mgbe ịkwesịrị iweghachi. E nwere ụzọ abụọ ga-esi abịaru nso.
Nke mbụ bụ mbupụ ndekọ na nchịkọta ndekọ. Iji mee nke a, na-agba ọsọ nchịkọta akụkọ (Rụzọ R, tinye regedit) ma jiri ọrụ mbupụ na mpaghara Njikwa ma ọ bụ na menu ndokwa. Iji bubata ndekọ niile, họrọ mpaghara "Kọmputa", pịa nri-mbupụ.
Fọpụtara nke nwere ndọtị .reg nwere ike ị "na-agba ọsọ" iji tinye data ochie na ndekọ ahụ. Otú ọ dị, usoro a nwere ọghọm:
Nkwado ndabere nke a n'ụzọ dị otú a bụ adaba iji jiri naanị Windows na-agba ọsọ.
Mgbe ị na-eji ụdị .reg a, ntọala ndekọ gbanwere ga-alaghachi na ọnọdụ a zọpụtara, ma ndị ọhụrụ e kere (ndị na-anọghị n'oge ahụ ka e kere ya) agaghị ehichapụ ma bụrụ ndị agbanweghị agbanwe.
Enwere ike ịnwe njehie na-abata ụkpụrụ niile n'ime ndekọ si na nkwado ndabere, ma ọ bụrụ na alaka ụfọdụ dị ugbu a.
Ụzọ nke abụọ bụ ịchekwa ndabere nke faịlụ ndekọ na, mgbe a chọrọ nduzi, dochie faịlụ ndị dị ugbu a na ha. Isi faịlụ ndị na-echekwa data ndekọ:
Faịlụ DEFAULT, SAM, SECURITY, Software, usoro si Windows System32 Config folder
Ndenye NTUSER.DAT zoro ezo na nchekwa C: Ndị ọrụ (Ndị ọrụ) User_Name
Site na ịpị faịlụ ndị a na ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ na nchekwa dị iche na diski, ị nwere ike weghachite ndekọ na steeti ọ nọ n'oge nkwado, gụnyere na ebe mgbake, ma ọ bụrụ na os anaghị ebu.
Ndabere ngwa nchekwa
E nwere ezumike free iji kwado ndabere ma weghachite ndekọ ahụ. N'ime ha bụ:
RegBak (Ndabere na Nweghachi aha) bụ usoro dị mfe ma dị mfe maka ịmepụta akwụkwọ ndabere nke ndekọ Windows 10, 8, 7. Ebe nrụọrụ weebụ bụ http://www.acelogix.com/freeware.html
ERUNTGUI - dị ka onye ntinye na dịka mbipute a na-agagharị, dị mfe iji, na-enye gị ohere iji akara ngosi akara ngosi n'enweghị interface graphical iji mepụta backups (i nwere ike iji mee ka backups jiri aka rụọ ọrụ). I nwere ike ibudata na saịtị //www.majorgeeks.com/files/details/eruntgui.html
A na-eji RegistryFinder mee ihe iji chọpụta data na faịlụ ndekọ, gụnyere ikwe ka ịmepụta akwụkwọ ndabere nke ndekọ nke usoro dị ugbu a. Naghị achọ nbunye na kọmputa. Na weebụsaịtị website http://www.nirsoft.net/utils/offline_registry_finder.html, na mgbakwunye na nbudata software n'onwe ya, ị nwekwara ike ibudata faịlụ maka asụsụ asụsụ Russian.
Ihe mmemme a nile dị mfe iji ya, n'agbanyeghị enweghị asụsụ asụsụ Russian na mbụ. Na nke ikpeazụ, ọ bụ n'ebe ahụ, ma ọ nweghị nhọrọ iji weghachite ndabere (ma ị nwere ike iji aka dee ederede ndekọ nchekwa na ọnọdụ achọrọ na usoro ahụ).
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla maọbụ nwee ohere ịnye ụzọ dị irè - M ga-enwe obi ụtọ na nkọwa gị.
Esi lelee SSD maka njehie, ọnọdụ diski na àgwà SMART
Anaghị akwado interface ahụ mgbe ị na-agba ọsọ .exe na Windows 10 - esi edozi ya?
Mac os Task Manager na nlekota oru nlekota ndi ozo